ဖုန်းတော် ကြောင့်…….။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖုန်းတော် ကြောင့်…….။
Posted by Kyi Lwin on Aug 30, 2013 in Creative Writing, News |9comments
မန်းဂေဇက်ရွာ သူကြီးနဲ့ တကွ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်း ကျန်းမာတော်မူကြပါစ။
မန်းဂေဇက် ရွာ ဆိုလို့ ခု ဒီဖက် အိုင်တီ ခေတ်ကြီးမှာ ပြော ပြော နေကြတဲ့ ကမ္ဘာဟာ ရွာကြီး တစ်ရွာ ဖြစ်သွားပြီ ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို သတိရမိသေးတော့ ။ ကမ္ဘာ ပြားပြီလို ဆိုတဲ့ သူကလည်း ဆိုကြသကွဲ့။ နည်းပညာ နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေ အင်မတန် မြန်ဆန် တိုးတက်လာတာကို တင်စား ကြသပေါ့လေ။
မှန်သပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက် အထိ ရွှေတို့ရဲ့ နိုင်ငံမှာ လူ့မလိုင်တွေရဲ့ အဆင်တန်ဆာ တစ်ခု ၊ အဆောင်အယောင် တစ်ခု အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဆိုတာ ခု ဒီဖက် ၃/ ၄ နှစ်လောက်မျာ မြို့ပေါ်နေ လူတွေ လူတွေရဲ့ လက်ထဲတောင် ၁၀% လောက်ပဲ ကိုင်နိုင်တာကိုး။ ( တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းတွေ ချပေးရာမှာလည်း အိမ်ထောင်စု ၂ စု မှာ ပျှမ်းမျှ ဖုန်း ၁ လုံး လောက်ရတာ။ ခွဲတန်းချပေး သည်မှာ ဖုန်းအလုံးရေ ( ၅၂.၀၀.၀၀၀) ၅၂ သိန်း မှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ( ၈၇.၀၀.၀၀၀) ၈၇ သိန်း ကော် အချိုးချ တွက်ကြည့်ပါက အိမ်ထောင်စု ၁.၇ ( ၁ဒဿမ ၇ )စု လျှင် မိုဘိုင်းဖုန်း ၁ လုံး သာ ရရှိနေကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ဆိုပါသည်။မြန် မာနိုင်ငံ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆၀ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူဦးရေ ၏ ၈.၇ ရာခိုင်နှုန်း သာလျှင် ဖုန်းသုံးစွဲနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ –7Day News, N0. 24)
ရွှေတို့တော့ နည်းပညာခေတ်ထဲကို ရောက်လာပြီ၊ နည်းပညာတွေနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ရပဟဲ့လို့ ကြွားလုံးထုတ်နိုင်တဲ့ ကာလဖြစ်မလားပဲ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီးကလည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်နက်မကိုင်ကြပဲ လက်တော့ပ် ပြောင်း ကိုင်ကြပါ။ သမ္မတရုံးမှာ လာတန်းစီရင်ပေးမယ်ဆိုလား။
တန်းစီတာ ဆိုလို့ တို့များနေတဲ့ ရပ်ကွက်မတော့ တစ်လ တစ်ခါ မဲနှိုက်ရာ၊ နှိုက်ပါသော်လည်း ပေါက်နိုင်ခဲရှင့်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတစေတနာနဲ့တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းကတ်များကို ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများအား ၂၀၀း ၄၀ ( သိုးမဟုတ်) စ ပေး တုန်းကတော့ ၁၀၀၀း၁၀၀ လောက်တော့ပေးထားသေးသပေါ့။
ခုများတော့ အချိုးတွေပြောင်း ကုန်ပြီ။ ရပ်ကွက်တွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသူများကို ကြည့်ရှု အုပ်ချုပ်သောရပ်ကွက်ရုံးမှ လူများတော့ မဲမနှိုက်ရ ၊ ခွဲတမ်းရ ၊ မရ မရှိစေရ။ အဲ သို့ပေတည့် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် လျှောက်လွှာ တစ်စောင်ထည့်ခွင့်လား။ အိမ်ရှိ လူကုန်ထည့်ခွင့်လား မသိသော်လည်း လျှောက်လွှာတင်တိုင်း မဲထည့်နှိုက်သဖြင့် တစ်ခါမှ မပေါက်သော အိမ်ထောင်စုများရှိသလို ၊ပေါက်ပြီး ရပြီးသား အိမ်ထောင်စု တချို့ ၂ ခါ ပြန် ပေါက်သည်လည်းရှိ၏။ ( ကံကောင်းပေစွ။) တဖက်က ကြည့်ရင် ပေါက်ပြီးသား ရပြီးသား လျှောက်လွှာများ ပယ်၍ နှိုက်သော် မရသေး မပေါက်သေးသော သူများအတွက် အခွင့်အရေး များများရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ သို့သော် မဲနှိုက်ပေးသော ရပ်ရွာလူကြီးများကား ထိုအသိ မသိ ၍ လား သိလျှက်လား ။မလုပ်တာလား။ မလုပ်ချင်တာလား။ လား ပေါင်းများစွာတည်း။
နှစ်ခေါက်ပါ ၊ နှစ်ခါပေါက်သူများကား စေတနာကြီးစွာဖြင့် တကယ်သုံးမည့် သူများကို ၁၅၀၀ကျပ်တန် / တန်ဖိုးနည်းဖုန်းကတ်အား မှောင်ခိုဈေးကွက်ထွင် ဈေးနှုန်းပြင်ပြီးသကာလ CDMA Card – ks.70,000- 80,000/ GSM card 140,000- 150,000/ ဖြင့် ပြန်ရောင်းကာ ကူညီလိုက်ကြလေသောကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတကယ်သုံးမည့် သူများအတွက် မုဒိတာပွါးမိပါတယ်။
မှောင်ခိုဈေး မဖြစ်စေဖို့ ဖုန်းကတ် အသုံးမပြုပဲ လက်ဝယ်သိမ်းကာ အမြတ်ကြီးစားမည့် ဘေးမှ ကာကွယ်ရန် ဖုန်းကတ် ပေါက်ပြီး ၂ လ အသုံးမပြုလျှင် ကတ်ကို အသုံးပြုခွင့် ဖျက်သိမ်းမည့်အရေးတွေးတာ လက်ဝယ် သိမ်းထားခြင်းမပြုပဲ စေတနာထား အမြတ်များဖြင့် ရောင်းချနေကြောင်း သိရသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်မှုကို အထူးအသိအမှတ်ပြုရပါကြောင်းရှင်။
သို့ကလိုကြောင့် .. ၀န်ကြီးကောင်းမှု အကြောင်းပြု ၊ ဖုန်း ကတ် ရောင်းဝယ်မှု။
မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံမှာဆို ၀န်ထမ်းတိုင်း ( တံမျက်လှဲ၊ လူနာတင်လှည်းဆွဲ က စ) ဖုန်း ကတ်တွေ ချပေးလိုက်တာ ..။ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ တံမျက်လှဲ ၊ တွန်းလှည်း ဆွဲ ရင်း သီချင်း နားထောင်နေတာ အဆင်ကို ပြေလို့..။ လက်ထဲမလဲ ငွေ ၁၀၀.၀၀၀ လောက်တောင် ပိုက် မိသေးသတဲ့။ ဒါလည်း မုဒိတာပွါးစရာပါပဲ။ မနာလို မရှိပါရှင့်။
သေရေး ရှင်ရေး ရှိလို့မှ ပြောစရာ ဖုန်း မရှိမဖြစ်မို့ မှောင်ခို အားပေး မလုပ်ချင်သော်လည်း ဒီတစ်လ လည်း မဲပေါက်ဖိုအရေး ရေးရေးမှ မမျှော်လင့်တာကြောင့် မ၀ယ်လျှင် ကိုယ်ပင် မသုံးရတာပဲ အဖတ်တင်မှာမို့ ခေါင်းမမာနိုင်တော့ပဲ လူမိုက်အားပေးလုပ်ရပါကြောင်းရှင်။
ဖုန်း တော်ကြောင့် အမျိုးတွေဆီ ဖုန်းခေါ်ပြီး နံပါတ်ပေးရသည် တမုံ့၊မိတ်ဆွေတွေဆီ ခေါ်ပြီး ဆက်သွယ်ရသည်တမျိုးနှင့် တပါတ် အတွင်း ဖုန်းခေါ်ခ ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ် ကျော်ကျော် ကုန်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း……။
ဖုန်းတော်ကြောင့် …..ကြွယ်ဝ လွန်ဖီး ၊ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး အဆက်ဆက်။
ဖုန်းတော်ကြောင့် ….အမြတ်ပေးဝယ်ယူ သုံးရသူများ…။
ဖုန်းတော်ကြောင့်….မျက်နှာ ပွင့်ကြောင်း ဆယ်အိမ်ခေါင်း…။
မန်းဂေဇက် ရွာသူ / ရွာသားများလည်း ဖုန်းတော်ကြောင့် ဆက်သွယ်မှုဧရိယာအတွင်း လူကြီးမင်းနှင့် မတွေ့စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
ဖုန်းတော်ကြောင့် ကြားလား၊ ကြားလား တွေ ကြားမှာ ခန္တီပါရမီ တွေ ပိုပြီး ပြည့်လာပါသေးတယ် မဟုတ်လား။
ဖုန်းတော်ကြောင့်… ကြားလား… ကြားရလားနဲ့…
အော်ရပါများလို့ လိပ်ထွက်သွားသူဦးရေ တိုးလာတာမို့…
ဆေးဆြာများလည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
၁၅၀၀တန် CDMA ဆင်းကဒ်လေးတစ်ကဒ်ကို
ကိုးသောင်းကျော် ပေး ဝယ် လိုက်ရကြောင်းပါ
ဖုန်းတော်ကြောင့် အခုထိ ၁၅၀၀ ကတ်မပေါက်သေးပါကြောင်း
ဘယ်ခေတ်က ထုတ်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ သုံးနေသလဲမသိတဲ့ W CDMA လို့ ခေါ်ကြတဲ့ CDMA 450 Mz ဆိုတဲ့ ဖုန်းတော်ကို GSM တွေ လိုင်းဝင်မကောင်းလို့ မဖြစ်မနေ ၀ယ်သုံးပြီးသကာလ……….
Android ခေတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Handset ၀ယ်မရတဲ့ ပြဿနာကြောင့်
ဂျီအက်စ်အမ်လေးတကဒ်လောက် ဈေးနှုန်းအမှန် (၁၅၀၀ကျပ်) နဲ့ ရပါစေကြောင်း နေ့တိုင်း ဆုတောင်းပါမီ။
အိုက်ဂလိုမှမဟုတ်ရင်တော့လဲ လူမိုက်အားပေး ဈေးကြီးပေးေ၇ွ့ ဆင်းကဒ်တခု တသိန်းခွဲနဲ့ဝယ်သုံးနိုင်အောင်
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဘားမန်း …ေိေိ